सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति, आइतबार विहान अनशन तोड्ने - Hamro Najar
सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ८ बुँदे सहमति, आइतबार विहान अनशन तोड्ने
प्रकाशित मिति: २०७७ आश्विन २५, आईतबार (२ हफ्ता अघि)
काठमाडौं । सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच मध्येरातमा ८ बुँदे सहमति भएको छ । २७ दिनदेखि आमरण अनसनरत डा. केसी र सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक गोपी मैनालीले शनिबार मध्यरातमा सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव गोपी मैनालीको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको गरेको थियो भने डा. केसीका तर्फबाट डा। जीवन क्षेत्रीको संयोजकत्वमा चार सदस्य वार्ता टोली बनेको थियो ।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको ६ बुँदे माग राख्दै डा. केसी १९ औं पटक अनशन बसेका थिए । ८ बुँदे सहमतिमामध्ये छ बुँदा डाक्टर केसीको मागका विषय रहेका छन् । ७ नम्बर बुँदामा सहमति कार्यान्वयनको विषय छ भने ८ नम्बर बुँदामा अनशन तोड्ने विषय छन् । मागलाई सरकारले कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित गर्नुपर्ने हुन्छ ।
केके सहमति भयो ?
यस्तै चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगले गठन गरेको कार्यदलको क्षेत्राधिकारमा डा। केसीबीच २०७५ साउन १०लाई पनि राख्ने सहमतिमा उल्लेख छ ।
#डा. गोविन्द केसीबीच